क्या तपाईं मलाई बता सकते हो कि कसरि वेब2को साथ 2016 मा बैकलिंक को निर्माण गर्ने.0लिङ्क गर्ने अभ्यासहरू?
अरू कुरा गर्नु अघि, आइपुगेको छ - वेब 2.0लिंकिंग प्रविधि अझै पनि काम गर्दै छन्! त्यसो भए, यदि तपाईं पत्ता लगाउन चाहानुहुन्छ कि कसरी 2016 मा ब्याकलिङ्कहरू सिर्जना गर्ने, उत्तम वेबको सही फायदा लिन 2.0लिङ्क प्रविधिहरू, तल तल एक छोटो दिशाको माध्यमबाट हेर्छौं. हाम्रो उद्देश्य तपाईंको वेबसाइटको वा ब्लग को रैंकिंग बढावा छ - जिन्दगी खोजकर्ताहरु को औसत प्रयोगकर्ता अनुभव को बिना - online appraisal commercial property. अनि निस्सन्देह, तपाइँ कुनै पनि अस्वीकार्य रणनीति वा योजनाहरू प्रयोग गर्नमा शंकास्पद हुनबाट रोक्न सबै ठाँउ चाहनु हुन्छ. यस तरिका, तपाईं सम्भावित मुख्य वेबमास्टर दिशानिर्देश उल्लङ्घन गर्नका लागि जान सक्नुहुन्छ र यसैले आफैलाई कडा वर्गीकरण सजाय कमाउनुहुन्छ. यसैले म तपाईंलाई देखाउन जाँदैछु कि 2016 मा ब्याकलिङ्कहरू कसरी राम्रो बनाउने र सुरक्षित तरिकाले सम्भव बनाउने, Google सँग बिर्सनु हुँदैन।.
तथापि, ध्यान दिनुहोस् कि वेब2बाट लाभ उठाउन.0ब्याकलिङ्कहरू तपाईसँग एक संतुलित सन्तुलित एसईओ रणनीतिमा चलाईनु पर्छ. र तपाईंलाई केवल राम्रो काम गर्ने लिङ्कहरू सिर्जना गर्न धेरै समय र प्रयासको लागि आवश्यक हुनेछ जसले तपाईंको पृष्ठ आगन्तुकहरूको वास्तविक मूल्य प्रस्ताव गर्न सक्छ. अन्यथा, तपाईंको वेबसाइटले गुगलसँग रातो रातो झण्डा बढाउनेछ, र त्यो सँधै एक रैंकिंग दण्डको साथ समाप्त हुन्छ - चाँडै वा पछि. त्यसोभए उनीहरुसँगको सम्बन्धमा धेरै कुराहरु छन् कि तपाईले तपाईलाई थाहा पाउनु भएको छ कि तपाईले तपाईलाई थाहा पाउनु भएको छ कि तपाईले तपाईलाई थाहा पाउनु भएको छ?.
यो मात्र मेरो सचेत शब्द हो जुन तपाईले यो प्रदान गर्न को लागि लिनु भएको छ - द्रुत सम्झौताको लागि माथिको अर्थ हो कि तपाईले मात्र कडा कडा कमाई पैसा बर्बाद गर्नुहुन्न, तर सबैलाई सम्भवतः भविष्यवाणी गर्न मिल्ने राम्रो भन्दा. त्यसोभए, आइपुगेको बिन्दुमा जानुहोस् - वेब2सिर्जना गर्नुहोस्.0लिङ्कहरू जुन वास्तवमा SEO मा शीर्ष-प्रदर्शन गर्ने परिणामहरूको सर्वोत्तम वितरण गर्न सक्षम छन्. तल तपाईले 2016 मा ब्याकलिङ्कहरू कसरी बनाउने भनेर बुझ्नका लागि मुख्य बुलेट प्वाइन्टहरूको सूची आउँछ.
अनलाइन उपस्थिति स्थापना गर्नुहोस्
तपाईंको मुख्य व्यवसाय वेबसाइट वा ब्लगको सक्रिय र लामो समयसम्म सामाजिक उपस्थितिको लागि सही आधार सेट अप गर्नुहोस्।. तपाईंको पहिलो चरण यहाँ प्रमुख वेब2मा तपाईंको प्रोफाईल पूरा गर्न छ.0तपाईको साइटहरू वा सामान्य विषय छलफलसँग सम्बन्धित सामाजिक साइटहरू. त्यसैले, म कसरी सुरुमा 2016 मा ब्याकलिंकहरू सिर्जना गर्न कसरी पत्ता लगाउन चाहन्छु - हामी निम्न सामाजिक स्पेसहरूमा प्रोफाइलहरू पूरा गर्न सुरु गर्छौं:
Google My Business मा तपाईंको व्यक्तिगत पृष्ठ भर्नुहोस्;
Yelp मा आफ्नो पृष्ठ बनाउनुहोस्;
ट्विटर, फेसबुक, LinkedIn मा पूर्ण सामाजिक खाता;
Alexa पेज लिङ्क पुष्टि को पूरा गर्न को लागी अगाडी बढयो;
TripAdvisor मा जानुहोस् (यदि तपाईले B2B सँग काम गरिरहनु भएको छ वा तपाईंको व्यवसायमा ईंट-र-मोर्टार घटक छ).
सबै सामाजिक खाताहरू र प्रोफाईल पृष्ठहरू एकै ठाउँमा छन्, यो तपाईंको मुख्य साइटमा फिर्ता लिङ्कहरू समावेश गर्ने समय हो। प्रत्येक. यसो गर्दा, दायाँ कुञ्जी शब्द पाठमा तपाईंको नयाँ सिर्जना गरिएका लिङ्कहरू लंगर नबिर्सनुहोस्. संकेत: प्रश्नहरू र जवाफहरू (Quora जस्तै) सँग एक राम्रो ब्लग वा राम्ररी संरचित समर्थन पृष्ठहरू छन्।. त्यो नरक जस्तो काम गर्दछ!
सामुदायिक पानाहरू सिर्जना गर्नुहोस्
अन्तिममा, तपाइँलाई के गर्न आवश्यक छ एसईओ को संसार बाट पुरा तरिकाले रोक्न, र प्रयोगकर्ताको लागि मूल्य उद्धार गर्ने गुणस्तर सामग्रीमा राम्रो काम. सबै चीजहरू प्राकृतिक रूपमा हेर्न, तपाईंले निम्नलाई ध्यान दिनुपर्छ:
सामन्य सामग्री पोस्ट गर्नाले कहिलेकाँही यसलाई लिङ्क गरिएको छ;
एक हफ्ते देखि पांच लिंक्स को एक सप्ताह को निर्माण;
Tumblr ब्लगहरूमा प्रकाशन प्रचार पदहरू, फेसबुकमा फ्यान पृष्ठहरू, वर्डप्रेस ब्लगहरू, इन्स्टाग्राममा खाताहरू, र YouTube मा भिडियो च्यानलहरू.